France iyizwe elihle ezinezindawo eziningi kungenzeka isiteshi noma isikebhe iholide. Abambalwa izifunda eFrance ivelele kulokhu: i-Midi, isifunda sase-Aquitaine, kanye Camargue. Ngamunye wabo unezimfanelo esiyingqayizivele.
Esokuqala Canal du Midi, a World Heritage Site kanye mfula endala yokufakelwa eYurophu ukuthi namanje kulandela Yiqiniso yayo yasekuqaleni. Lo msebenzi kaPierre Paul Riquet waqedwa ngo 1681. Endleleni, sihamba phansi Midi, ungabona Le Somail futhi Carcassonne, nemizana amabili ebukekayo medieval. Futhi uma umthanda ukudla okuhle futhi iwayini enkulu, ungazama Minervois Midi odumile futhi Corbieres, futhi cassoulet, a iyisibiliboco kule ndawo.
Yini ebukekayo ikakhulukazi wukuthi endleleni loyibona izigodlo emangalisa, izinqaba medieval, nemizana bezitolo ubudala. Futhi labo abathanda imvelo ngokungangabazeki bayojabulela ihlane elingonakalisiwe futhi ukunotha kwezilwane zasendle.
Khona-ke kukhona Ypres, indawo emangalisa egcwele nokubaluleka okungokomlando ulwandle lase esiyingqayizivele, imisindo, nokunambitheka. Sail indlela yakho okumnandi Belgian ushokoledi ngezandla, noma ukhombise impilo futhi eyizingqabavu besizulu Belgian. Izwe lizokwamukela ngenjabulo emsulwa ngazo zonke izinzwa.
5. Abase Netherlands
Alukho uhlu lwe- engcono izindawo European kungaba ephelele ngaphandle Netherlands. Lokho kuhlanganisa izindawo ezinikeza okungcono wesiteshi isikebhe amaholide e-Europe. Izwe nemifula kwadingeka ukuba uthole indawo yayo ohlwini, ngenxa lokuzwakalisa izimvo zayo emangalisa, imizila ebabazekayo, kanye kalula nokuthula ngomkhumbi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#umsele #isikebhe somfula #uhambo europetrains i-eurotrip trainjourney